Amerika Avaratra · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Marsa, 2011
Amerika Latina 18 Marsa 2011
Azia Atsinanana 12 Marsa 2011
Etazonia 07 Marsa 2011
Etazonia 06 Marsa 2011
Misy tranga iray mivoatra any Minnesota izay mahatonga ny fanontaniana hoe inona ny fahalalahana miteny. Ilay mpitsabo taloha William Melchert-Dinkel, 48 taona, avy any Faribault dia voapanga niaraka tamina lehibe roa ho namporisika, nanome toro-hevitra na nanampy ny hafa hamono tena. Kanefa nilaza ilay mpahay lalàna misolo vava azy ireo, tao amin'ny aterineto, fa fahalalahana miteny ny toro-hevitra nataon'ny olona soloiny vava.
Angletera 03 Marsa 2011
ray amin'ny zava-manahirana indrindra ny miresaka azy nandritra ny roa herinandro nanoherana ny Kolonely Muammar Al Gaddafi any Libya izay dia ny fitateram-baovao fisiana lazain'ny mpitondra Libyana "Mpikarama an'ady Afrikana" na "vahiny" - midika hoe avy any Afrika atsimon'i Sahara sady "Mainty" ampiasaina hampijoro ny fitondrany efa mihozongozona. Fa maninona no mametraka endrika mainty amin'ity tantarana mpikarama an'ady ity?